Ny valim-pifidianana nasionaly amin'ny volana 4 avy any an-kavia mankany ankavia any Timmermans? Mifidy ireo mpifidy! : Martin Vrijland
Ny valim-pifidianana nasionaly amin'ny volana 4 avy any an-kavia mankany ankavia any Timmermans? Mifidy ireo mpifidy!
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 27 May 2019	• 4 Comments
Ahoana izany? Nandritra ny 4 volana, nivadika tanteraka tanteraka ny vondrona Eorôpeana tamin'ny fifidianana marina ho an'ny PVDA! Ireo fahagagana dia tsy eo amin'izao tontolo izao! Azontsika atao tsara izany "Ny mpandrafitraLazao fotsiny na tsapanao fotsiny fa famitahana madio ny fifidianana. Manatri-maso ny hosoka amin'ny fifidianana isika eto! Izany rehetra izany dia ny fanosehana an'i Frans Timmermans (izay nanomana ny toerana misy azy nandritra ny taona maro), manoloana ny fiadidian'ny Vondrona Eoropeana.
Ity horonantsary mihatsaravelatsihy manaraka ity avy amin'ny siokan'i Jean-Claude Juncker, izay maneho ny safidiny ho an'i Manfred Weber, dia mazava ho azy ary mazava ho azy fa ny hahatonga ny fahatsapana fa misy ny dingana demaokratika (izay tsy mbola azo antoka ny vokatra Timmermans) . Efa voafaritra izany. Nampiofanina i Timmermans mba hametraka mafy ny fanjakana tsy refesi-mandidy ao amin'ny firenena. Ambonin'izany fotoana izany, ny vondrona mavitrika izay nomena ny fanilikilihana amin'ny zon'olombelona, ​​ny fanindrahindram-pirenena ary ny "mpandinika saina" dia ho voavaha. Ity fandaniana ity dia mifandray amin'ny tsy fahombiazan'ny Brexit. Izy io dia soratra iray lehibe rehetra. Ireo izay mbola tsy mahita izany, dia tokony haka fanairana isan-taona amin'ny test de l'IQ.
Fanampiana mazava @JunckerEU: "@ManfredWeber no lehilahy tsara indrindra ho lasa ny Komisiona.. Ao amin'ny #EP2019 Ianao no manapa-kevitra ny amin'ny hoavin'ny mpitarika bc ny fizotry ny kandidà amin'ny ankapobeny izay manohana ahy dia tsy misy afa-tsy ny manome olona ny zo hanapa-kevitra hoe iza no hitarika ny " pic.twitter.com/J7DEFCTgd4
Toy izao ny valin'ny fifidianana ho an'ny fifidianana voalohany tamin'ny volana martsa tamin'ity taona ity. Ny VVD sy ny FvD no mbola lehibe indrindra, noho izany dia ny antsasak'i Holandy no nifidy ny marina. Tokony ho tsapanao izao fa tsy tena mifidy akory ity fifidianana manontolo ity, fa ny momba ny fihetseham-po kely fotsiny dia eo ambanin'ny vahoaka. Ny vokatra dia voafaritra ao ambadiky ny sehatra ary tsy misy ifandraisany amin'ny fifidianana. Ahoana ny nahatonga ny Holanda tampoka ho nanoloana ny PVDA tao anatin'ireo volana vitsy ireo; antoko iray izay tsy dia nandray anjara firy intsony? Ny vokatra "Timmermans"? Tsy mihomehy ve izany?
Ao amin'ny ahy lahatsoratra teo aloha Efa nanoratra aho fa ireo fifidianana farany ireo dia maneho fa tsy fifidianana izy ireo. Tetika fanadiovan-tsonia madio no manosika ny fandaharam-potoana efa voafaritra! Frans Timmermans (izay tsy nahalala na iza na iza ho an'ny 2014 sy ny fanatrehany tao amin'ny kianjan'i Majdan ao Okraina) dia tokony ho filohan'ny Vondrona Eoropeana. Ah, miandrasa iray minitra! Ny Holandey dia mirehareha loatra fa misy olona Holandey iray afaka mandray anjara amin'io asa io, fa tampoka teo izy ireo dia niova tampoka avy eo ankavia miankavanana. Kolder!
Mazava ho azy fa mbola mahita tombony amin'ny ankavanana any Eorôpeana isika, saingy izany indrindra no manohana ny fisehoan'ny demokrasia madio ary ny mbola mila mitombo. Ity fiarandalamby fiarovana ity dia tsy ho ela rehefa hivoaka ny hatsiaka ireo scandales ary (araka ny filazàna) ny tsy fahombiazan'ny Brexit any Royaume-Uni dia mampiseho an'i Eoropa manontolo fa ny vondron'olona manitsakitsaka (izay tsy maintsy nitombo tamin'ny fanohanana tamin'ny alalan'ny antoko mpanohitra ary feon-tserasera) dia tsy maintsy tapahina. in ity lahatsoratra ity Hazavako mazava tsara ny fomba fiasan'ny fanoherana manara-maso sy ny antony tsy maintsy nitombo ny fiaramanidina fiarovana ny zana-kavanana voalohany.
Fotoana izao hijanonanao tsy hitatra izany ary fotoana izao dia tena manao zavatra ianao. Azonao atao ny mieritreritra hoe:Eny, avy eo, saingy hosoka ny mpifidy. Tsara izany, lasa filohan'i Etazonia i Timmermans. Eny fa, farafaharatsiny dia manana mpandatsa-dranomaso any izahay. Tsy misy ratsy amin'izany?".
Raha niodidina ny 16 aho nandritra ny herintaona, dia niasa tany amin'ny trano fandoroana kisoa lehibe iray aho nandritra ny faran'ny herinandro (toy ny asa tapa-potoana). Dia tsy maintsy nisokatra ireo kamiao tonga (feno kisoa) ary nanidy ny varavaran 'ny famatoran-trano mifandray rehefa nisokatra ny tailgate. Tsy mbola nahita ny fandripaham-bato aho, satria ny asako dia ny manidy ireo vavahady sy manolotra ny kisoa rehefa tsy niditra izy ireo. Ny kisoa dia nanam-boka mafana hatrany alohan'ny nidinina tamin'ny penitra (nambara tamiko). Nahazo toky izy ireo fa somary niadana ihany izy ireo taorian'ny fitsangatsanganana ary ny adrenalinina dia tsy nihoatra loatra. Dia hihinana tsara kokoa ny hena.
Notarihina ho amin'ny famonoana ianao, saingy noho ny fisian'ny setroka mafana avy amin'ny media (izay mamy anao amin'ny mofo sy ny lalao), tsy takatrao ny zavatra miandry anao amin'ny faran'ny tonelina. Miezaka manondro izany aminao aho amin'ny alalan'ny lahatsoratrao. Fotoana izao ho anao hahita ny zava-mitranga. Tena matotra!
Inona no hitranga? Ny fanjakana politique tsy refesi-mandidy dia mihazakazaka avy amin'ny EU tsy demokratika izay mampiditra lalàna sy fitsipika maro izay mametra ny fahalalahan'ny tsirairay (ary manaisotra) ny fahalalahan'ny tsirairay. Ireo lalàna sy fepetra ireo dia natao hanampiana sy hifehezana ny andevo. Mandroso mankany amin'ny fitondrana tsy refesi-mandidy isika ary raha mbola tsy hitanareo fa tena matory tokoa ianareo. Eo ambany lelan'ny hafanana ianao. Sa ianao no anisan'ny tarika izay mampiasa ny fitaovam-pihetseham-po ary mitondra ny sisa amin'ny famonoana? Vakio ny lahatsoratra sasany miverena ato amin'ity tranonkala ity ary fantaro ny fomba nandehananao.
Lisitry ny rohy loharano: tpo.nl
Fampisehoana lehibe manoloana ny fiavian'i Thierry Baudet
Politika sy haino aman-jery manosika ny olona amin'ny valin'ny fifidianana sandoka amin'ny fifidianana Eoropeana (PVDA tampoka nandresy)
Ny fifidianana Eoropeana sy ny tambajotra fiarovana FvD ('fanolanana amin'ny ohatra mpifindra monina')
Tags: EU, European, Fivoahana, Featured, Frans, FVD, Junker, pifidianana, rohy, parlemanta, fitsapan-kevitra, marina, Timmermans, RESULT, fifidianana, ny valim-pifidianana, very, VVD, Fandresena
27 May 2019 amin'ny 13: 12
Mazava ho azy fa ity indray dia "fifidianana" tarihin'ny mpitarika avy amin'ny script. Antsoy azy ireo ny andian-tsoratra amin'ny vokatry ny soratra. Tsy afaka manantena zavatra tsara avy amin'ny Hen ianao.
27 May 2019 amin'ny 22: 40
Soa ihany fa manana ny ANP isika izay 'mandrakitra' ny vato rehetra 'voaisa' amin'ny tanàna, ary ny ANP dia tsy misy afa-tsy orinasa tsara tarihan'ny Mole. 😀
https://www.npostart.nl/nieuwsuur/26-05-2019/VPWON_1297115 (avy amin'ny 5: 29)
27 May 2019 amin'ny 22: 43
29 May 2019 amin'ny 10: 58
Nahoana no misy orinasa tsy miankina amin'ny fifidianana? Tsy tokony hialana ve ny fisian'ny fifandonana mahaliana?
Taorian'ny nisokafan'ny boaty fantsom-pifidianana, dia nanao lisitra haingana tamin'ny lisitry ny lisitra ny mpikambana ao amin'ny birao fandatsaham-bato: ny habetsahan'ny safidy manan-danja izay azon'ny antoko politika rehetra. Ny biraom-pifidianana dia miantso ny vokatr'io fitomboana haingana io ho an'ny tanàna misy azy. Ny tanàna dia miantso ny isam-bato rehetra ho an'ny distrikany amin'ny alàlan'ny ANP (General Dutch Press Press). Mifototra amin'ireo totalim-pifidianana ireo, ny NOS dia manolotra valiny faratampony amin'ny takarivan'ny fifidianana.
Ny takarivan'ny andron'ny fifidianana, misy vokatra mialoha sy tsy ofisialy amin'ny antoko ankolaka ao amin'ny media. Mifototra amin'ny fandrefesana ny fifidianana sy / na ny fifidianana haingana amin'ny biraom-pifidianana. Ny tarehimarika vitsy dia ny laharana voalohany amin'ny biraom-pifidianana, eo amin'ny sehatry ny antoko. Ireo dia nalefa tamin'ny alalan'ny telefaona tamin'ny biraom-pifidianana ho an'ny tanàna. Manangona azy ireo izy ary mandalo mankany amin'ny ANP
Fotoana fohy taorian'ny fotoam-pitsarana tao amin'ny faritany provinsialy, ny valiny tsy ofisialy dia efa nambara tamin'ny ANP.
2595 BM ny La Hague
« Politika sy haino aman-jery manosika ny olona amin'ny valin'ny fifidianana sandoka amin'ny fifidianana Eoropeana (PVDA tampoka nandresy)
Davina Michelle mpandika teny manaraka ao amin'ny Eurovision Song Contest? Duncan Laurence mahita ny kandidà! »
Total visits: 16.020.125